MaInvestor Immigration Zvirongwa - Residency uye Citizenship Zvirongwa
Ugari neInvestment, Kugara nekudyara uye Golden Visa
Citizenship / Kugara nekudyara nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment uye Magweta e Citizen neInvestment uye ma brokers ezvivakwa zvekugara zvirongwa zvinoshanda zvakabatana kuchengetedza kwevatengi.
Kugara patsva nemaInvestment vamiririri vanopa masevhisi ekugara nekudyara, Kugara nehurongwa hwekudyara, Kugara nehurongwa hwekudyara, Kwechipiri Kugara nekudyara, Kugara kwechipiri nekudyara, ugari nekugara nekudyara, Kugara zvachose nekudyara, Kugara kwenguva pfupi nekudyara, Kugara nekudyara chirongwa, Kugara nehurongwa hwekudyara, Citizenship nekudyara, Citizenship nezvirongwa zvekudyara, Citizenship nehurongwa hwekudyara, wechipiri Ugari nekudyara, hunyanzvi hwekuva Citizenship nekudyara, kugara uye ugari nekudyara, kugara uye ugari nekudyara, hupfumi Citizenship zvirongwa, Citizenship nekudyara scheme, Citizenship nehurongwa hwekudyara, yechipiri pasipoti, yechipiri pasipoti zvirongwa, yechipiri pasipoti chirongwa, mbiri yechipiri pasipoti, pekugara uye yechipiri pasipoti, repamutemo repasipoti repiri, repiri pasipoti nekudyara, yechipiri ugari pasipoti, yechipiri pasipoti chirongwa, chechipiri pasipoti zvirongwa, vhiza dzegoridhe , zvirongwa zvegoridhe vhiza, chirongwa chendarama vhiza, yechipiri vhiza yegoridhe, yechipiri vhiza vhiza chirongwa, mbiri dhiza vhiza, ugari uye goridhe vhiza, kugara uye visa yegoridhe, goridhe vhiza ugari, goridhe vhiza scheme, goridhe vhiza zvirongwa.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara uye Citizenship nekudyara nerumwe rutsigiro.
Iine Minimum Investment ye Residency uye Citizenship
Nyika Dzakakurumbira dzeInvestment
Mutengi kutsigira Citizenship nekudyara uye Kugara nekudyara
Chikwata chedu che Ugari uye kugara nemaInvestment Agents uye ne Investment Lawyers inopa vatengi uye mhuri dzavo nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara, kugara nekudyara uye mimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira kune kugara nekudyara kana Golden Visa kana ugari nekudyara kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana, kupa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu uye zvimwe zvakawanda, iyo inosanganisira kuronga kwemari uye zvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye uye sekondari pekugara.
Rutsigiro Rwakakosha kuneVagari:
Isu tinopa zvinodhura ugari hwemo nekudyara uye kugara nemabasa ekudyara, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo, inokwanisika inivhesitimendi inzvimbo yekupinda kune dzimwe nyika vanokumbira, vagari vanodhura nekudyara uye kugara nevanoona nezvekudyara, vagari vanodhura nekudyara uye kugara nemagweta ezvekudyara uye yakasimba inowona nezvekupinda munyika.
ugari nekudyara uye kugara nekudyara kune 37 Nyika.
Ndarama vhiza kunyika 37.
Ugari nekudyara kune 37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kuenda ku106 Nyika.
ugari nekudyara uye kugara nezvirongwa zvekudyara.
Zvirongwa zvevisa zveGoridhe kunyika makumi matatu nenomwe.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kune 37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kune 37 Nyika.
Zvirongwa zveMabhizinesi ekupinda munyika kuenda ku106 Nyika.
Hugari hwakakosha nekudyara uye kugara nekutsigira kwekudyara kwevanhu uye mhuri.
ugari nekudyara uye kugara nekudyara kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvekudyara zvivakwa nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana kudzoka kwakanaka pane kudyara, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kuve kwavo ugari nekudyara nekugara nekudyara. Isu tinosungirirwa nevashoma vashambadziro vezvivakwa vane yakanaka track rekodhi uye yavo chivakwa chiri munzvimbo dzakanaka, kutora zvakanaka kudzoka.
Yakanakisa edzimba dzimba zvirongwa neinvestment muzvivakwa.
Ugari nekudyara nekugara nekudyara Gweta rinopa zvakadzama magwaro rubatsiro kune rako rakabudirira ugari nekudyara uye kugara nekudyara. Yedu yakajairwa masevhisi ehugari nekudyara uye kugara nekudyara kunosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda zvekutama, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira kuva mugari nekudyara nekugara nekudyara kune vatengi kuti vawane ugari hwemo kana kugara uye nekuderedza njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira zvirinani.
Kuti isu tifambire mberi nehukama hwako nekudyara nekugara nekudyara kunyorera tinoda makopi akaongororwa evatengi nenhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa zvemugari nekudyara nekugara nekudyara kunyorera. Magweta edu akasarudzika ehugari nekudyara nekugara nekudyara uye vhiza yegoridhe ichabatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zvekuva mugari nekudyara uye kugara nekudyara kunyorera zvagadzirira, isu tinozoizadza neakakodzera zviremera.
Duration:1 kune mwedzi 4
Kamwe kana chikumbiro chako chekuva mugari nekudyara nekugara nekudyara chikatenderwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye totanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
ugari nekudyara uye kugara nekudyara nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa hukuru hwakanakisa nekudyara uye pekugara nerutsigiro rutsigiro rwekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa.
Ichitsigirwa nehukama hwepasi rese nekudyara uye kugara nekudyara ruzivo uye zvinodiwa nemutemo, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Hugari hwedu nekudyara nekugara nemasevhisi ekudyara zvinopa mitengo yakachipa kwazvo, ine chinzvimbo chinobudirira chinobudirira.
Isu takatora makore eruzivo rwekuva vagari vemo huviri nekudyara nekugara vachitsigira vatengi pamwe nemhuri dzavo.
Ruzivo rwehugari nekudyara nekugara nevanogadzira mari nevamiriri vepamutemo vachipa rubatsiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta uye vamiririri kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Usati uri mugari wemo nekudyara nekugara uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro ichave iriko kune bhizinesi kana rutsigiro rwemunhu
Isu tine ruzivo rwepasi rese mukuva mugari nekudyara uye kugara nekudyara kusanganisira, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, ugari hwako nekudyara uye kugara nekudyara kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verenga mari yekuva mugari nekudyara uye kugara neInvestment
Kuti uverenge mutengo wekuva mugari nekudyara nekugara nekudyara ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba yakakura yevatengi, isu tinokwanisa kupa zvirinani masevhisi nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo wekuva mugari nekudyara uye pekugara nechirongwa chekudyara uye zvimwe zvikwereti.
Isu hatitsigire kana kupa Citizenship nekudyara uye Residence nemasevhisi ekudyara kune avo vataurwa pazasi Vanhu kana mabhizinesi:
Citizenship nekudyara uye Residence nekudyara mabasa hazvipi zvinopihwa kune Vatengesi kana vanogovera maoko nezvombo.
Ugari nekudyara uye Residence nemapurogiramu ekudyara hadzipi kupihwa kweTechnical kuongororwa kana maindasitiri espionage eVoIP.
Citizenship nekudyara uye Residence nekudyara kubvunza hazvipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana mhosva zviitiko.
Citizenship nekudyara uye Residence nerutsigiro rutsigiro hazvisi zvevanhu vanobata zvinhu zveGenetic.
Citizenship nekudyara uye Residence nekudyara mabasa haisi yemabhizimusi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine njodzi zvebayoloji kana nyukireya.
Ugari nekudyara uye Residence nepurogiramu yekudyara rutsigiro haruwanikwe kune vanhu vanobata mukutengesa, kuchengetedza, kana kufambisa nhengo dzeVanhu.
Citizenship nekudyara uye Residence nekudyara haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Citizenship kubudikidza inivhesitimendi uye Residence kubudikidza inivhesitimendi zvirongwa basa hadzisi dzezvitendero zvechitendero uye masangano avo.
Citizenship nekudyara uye Residence nekudyara mabasa haina kupihwa kune vanhu vanobata mune Zvinonyadzisira.
Hedu Citizenship nekudyara uye Residence nekudyara makurukota haitsigire bhizinesi rekutengesa muzvinodhaka.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako nezviremera kubvumidzwa kwekunyorera Citizenship nekudyara uye Residence nekudyara nekudyara.
Maitiro Ekubvumirwa Kubasa
Kwekugara kwenguva pfupi
Embassies uye maMiriri
Please shanyira Kuenda kune dzimwe nyika Peji
Citizenship / Kugara neInvestment uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa kune izvozvi kana zvenguva inotevera zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kuenda nemhuri yako nekudyara mari, isu semumwe wako, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye kana paungangoda pamutengo unodhura.
Kunze kwekuva Citizenship nekudyara kwekudyara, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare, ayo iwe ausingawane pasi peimwe amburera yakapihwa nechero vamwe vanachipangamazano vanotigadzira chiteshi chekumira-munyika 107.
"Isu takaisa makore ekuyedza uye pasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Citizenship nekudyara nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga-kumusoro nepasirese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani yakachipa nesu.)
Kana iwe uchida kubvunza, ye digital kubhadhara mhinduro senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meCitizenship nekudyara kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga bhizinesi riripo kutanga pakarepo.
Our kambani yevashandi inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo vakasununguka.
Bhizinesi foni masystem pamwe ne nhamba dzekuverenga Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services
Accounting, kushingairira kwakakodzera uye zvakawanda.
Mushure mekugara zvakare nekudyara, setup bhizinesi.
Isu tinopa pazasi zvakataurwa mhinduro dzeIT
Ecommerce Kuvandudza mu
Magweta e Citizenship / Residency neInvestment
Isu tinopa Citizenship yepamutemo neInvestment mhinduro uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha kwazvo ,, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo ine akanakisa evapukunyuki vamiriri zvakare, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa yevatengi sevhisi ruzivo neakajeka nzira yekudyara mhinduro vanhu nemhuri dzavo. Hwedu Citizenship nechikwata chekudyara inopa zvakagadziriswa mhinduro dzekubudirira kweiye Mutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara, pamvumo yako yekugara inogamuchirwa
Simba regweta rinodikanwa kune ese emutemo zviito pachinzvimbo chako ne Citizenship nevekudyara solicitors. Kana iwe uri kana kuronga kushanyira, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kunyoreswa zviri pamutemo nemumiriri.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Ugari / Kugara neInvestment
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara?
Kugara nekudyara, kunogona kutsanangurwa sekuti, kuwana ugari kuburikidza nekudyara mune hupfumi kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, hurumende zvisungo, nezvimwe.Nyorera kunogara nekudyara, kugaramo nehurongwa hwekudyara inotsigirwa nehugari hwekugara nemasevhisi ekudyara, kuburikidza nepatinogona napo. kugara nemagweta ekudyara, kugara kwakanyanya nemagweta ezvekudyara uye kugara kwakanakisa nevarairidzi vezvekudyara, kushanda pekugara zvakanakisa nevamiriri vezvekudyara, uye mafemu akanakisa ekuona nezvekupinda munyika.
Kugara patsva nemabasa ekudyara | Kugara patsva nevamiriri vezvekudyara | Kugara patsva nemagweta eInvestment | Kugara patsva nemagweta ekudyara | Kugara nevanoona nezvekudyara
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara?
Ugari nekudyara, hunogona kutsanangurwa sekuti, kuwana ugari kuburikidza nekudyara muhupfumi kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuve mugari nekudyara, ugari nehurongwa hwekudyara hunotsigirwa nehugari hwemo nevekudyara mabasa, kuburikidza nepatinogona napo. ugari nemagweta ekudyara, kuva mugari wakanakisa nemagweta ekudyara uye kuva mugari wakanakisa nevarairidzi vezvekudyara, kushanda kuva mugari wakanakisa nevamiririri vezvekudyara, uye mafemu ekuona nezvekupinda nekubuda munyika.
Ndeipi tsanangudzo yepasipoti yechipiri?
Yechipiri pasipoti, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo kuburikidza nekudyara muhupfumi kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, real estate, bhizinesi, hurumende zvisungo, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri, yechipiri pasipoti chirongwa chinotsigirwa neyechipiri pasipoti masevhisi, kuburikidza nemagweta edu echipiri epasipoti. , akanakisa echipiri magweta epasipoti uye akanakisa echipiri mapasipoti vanachipangamazano, vanoshanda pane akanakisa echipiri mapasipoti vamiririri, uye akanakisa mafambiro ekupinda munyika.
Chechipiri pasipoti services | Chechipiri pasipoti vamiririri | Yechipiri pasipoti magweta | Yechipiri mapasipoti magweta | Chechipiri pasipoti vanopa mazano
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa?
Ndarama vhiza, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mvumo yekugara kuburikidza nekudyara muhupfumi kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, hurumende zvisungo, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe, chirongwa chendarama vhiza inotsigirwa neyegoridhe vhiza masevhisi, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe visa magweta. , akanakisa egoridhe vhiza magweta uye akanakisa egoridhe vhiza varairidzi, vanoshanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri, uye akanakisa ekupinda nekubvunza mafemu.
Ndarama vhiza services | Ndarama vhiza vamiririri | Magoridhe vhiza magweta | Magoridhe vhiza magweta | Ndarama vhiza vanopa mazano
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweCitizenship / Kugara nekudyara?
Mari shoma yekudyara kweCitizenship nekudyara iri.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuCitizheni / Kugara nekudyara?
Hongu, gweta uye vamiririri vedu vanopa rutsigiro rweHurumende nekudyara
Citizenship / Residence neInvestment inodhura?
Mutengo weCitizenship neInvestment uye Residency neinvestment fund zvinodiwa ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubvunza fizi yeCitizenship neInvestment, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvinotsigira zveKugarazve neInvestment mhinduro.
Ndeipi nyika vagari vanogona kunyorera Citizenship nekudyara kana investor visa?
Citizenship nekudyara masevhisi eanogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mashoma mienzaniso ndeye Citizenship nekudyara kubva kuAsia, Citizenship nekudyara kubva kuAfrica, Citizenship nekudyara kubva kuEurope, Citizenship nekudyara kubva kuSouth America, Citizenship nekudyara kubva kuMalaysia, Residency na kudyara kubva kuBangladesh, Citizenship nekudyara kubva kuIndonesia, Citizenship nekudyara kubva kuSri Lanka, Citizenship nekudyara kubva kuNepal, Citizenship nekudyara kubva kuIndia uye Citizenship nekudyara kubva kuUAE.
Professional Citizenship / Residency neInvestment Guidance
Kumbira Mahara kubvunza kune yako Citizenship / Kugara neInvestment
Investor kutamira kune Nyika dze48!